Ny 4 P an'ny fanatsarana ny motera maoderina | Martech Zone
Alakamisy, Aogositra 18, 2016 Alatsinainy, Aogositra 22, 2016 Douglas Karr
Mihorohoro kely ny tontolon'ny SEO raha ny vaovao Moz dia manapaka ny mpiasa ao aminy amin'ny antsasany. Nambaran'izy ireo fa miakatra avo roa heny izy ireo amin'ny fifantohana vaovao amin'ny fikarohana. Izy ireo dia mpisava lalana sy mpiara-miasa ilaina amin'ny sehatry ny SEO efa an-taonany izao.
Tsy izany no fomba fijeriko be fanantenana amin'ny indostrian'ny Fikarohana Organika, ary tsy azoko antoka hoe aiza no tokony hampisondrotra an'i Moz. Na dia manohy manamboatra valiny marina sy tsara amin'ny alàlan'ny faharanitan-tsaina artifisialy sy algorithma voadio aza i Google, dia hiala ireo fepetra takiana amin'ny fisahanana ireo mpanolontsaina fikarohana sy mpiasa. SY SEO fitaovana mipoitra isan-kerinandro izay mifaninana amin'ny toa an'i Moz.
Dimy taona lasa izay, ny ankamaroan'ny antsika consulting marketing natokana ho an'ny SEO ny ezaka. Nanana mpandalina SEO manokana izahay. Mandrosoa 5 taona ary mampiasa fitaovana goavambe avy amin'ny mpanohana anay izahay gShift izay manome fahitana amin'ny fisianay tranonkala iray manontolo, fa tsy ny fikarohana organikay fotsiny. Atambatra amin'ny Analytics ary webmaster, ny vahaolana gShift dia manampy antsika hanara-maso ny ezaka ara-barotra omnichannel, ao anatin'izany ny fahombiazan'ny organika, ankoatry ny fikarohana influencer, ny fahitana atiny, ny fanaraha-maso ny marika, ary maro hafa.
Tsy orinasa intsony ny SEO; ao anatin'ny indostria io. Endri-javatra io amin'ny sehatra. Tetika iray ao anatin'ny tetikady marketing dizitaly. Fahalalana takiana amin'ny mpivarotra tsirairay fa tsy ny toerany manokana. Ny mpivarotra rehetra dia tokony hahatakatra ny fomba fampiasana ny milina fikarohana ao anatin'ny paikady ankapobeny ary hahatakatra ny toerana mety ao amin'ny tontolon'ny omnichannel. Nandritra ny fotoana lava be, nijery izahay fa tsy nahatratra ny sambo amin'ny fanatsarana ny fanovana ireo orinasan-tserasera sy sehatra SEO, manoratra atiny lehibe, ary fitarihana mankany amin'ny fiovam-po. Nandritra ny fotoana lava loatra, ny indostrian'ny SEO dia momba ny backlinks, teny lakile ary laharana raha mandroso ny mpanjifa sy ny motera fikarohana.
Tsy hiombon-kevitra amiko ny manam-pahaizana, saingy manana mpanjifa an-jatony maro izay mivoatra amin'ny fifantohana farany. Na dia mbola miantoka ny tranokalan'ny mpanjifanay aza izahay araka ny torohevitr'i Google ary manohy manara-maso ny laharana izahay, tsy eo no ampiharantsika ny ankamaroan'ny ezaka ataonay. Izaho dia tsy milaza ny SEO dia tsy zava-dehibe, mbola fantsona voalohany ahazoana izany. Milaza aho fa ny fampiasam-bola amin'ny SEO dia tsy hahazo ny famerenana paikady hafa. Ireo paikady ireo dia ny fampiroboroboana sosialy, fampiroboroboana karama, fifandraisam-bahoaka ary fananganana tranomboky atiny voalohany.
Fampiroboroboana ara-tsosialy - Tsy mitsidika ny tranokalanao matetika ny vinavinanao sy ny mpanjifanao. Na izany aza, manao firaisana ara-tsosialy izy ireo. Raha te hifandray amin'ny toerana misy ny vinavinanao sy ny mpanjifanao dia tokony hampiroborobo ny atiny misy azy ireo ianao. Ireo media sosialy voalaza ireo dia matetika mahatratra mpihaino vaovao, izay miresaka momba antsika an-tserasera avy eo, manangana ny fahefan'ny fikarohana organika anay.
Fisondrotana karama - Na dia tianay aza ny WOM sy ny fizarana votoaty an-tsokosoko hanitarana ny fanatrarana ny marika, ny tena marina dia ny dokam-barotra no tetezana izay tsy maintsy ampiasaintsika mba hanitarana izany. Ireo tombontsoa karama ireo dia matetika mahatratra mpihaino vaovao, izay miresaka momba anay amin'ny Internet, manangana ny fahefan'ny fikarohana organika anay.
Fifandraisana amin'ny vahoaka - Ny fananana ekipa matihanina mitady fotoana hampahafantarana ny marikao sy ny talentanao anatiny dia ilaina. Ireo lahatsoratra avy amin'ny famoahana mifandraika amin'izany, ny dinidinika amin'ny podcast, ary ny fahafaha-miteny miresaka amin'ny ekipanay PR dia namorona fiantsoana fahefana ambony sy avo izay ahazoanay fahefana hitady.
Tranonkala Premier Content - Ny atin'ny evergreen dia tsy manampy ny mpanjifanay intsony. Ny lahatsoratra feno miaraka amin'ny fikarohana, famolavolana, atiny lalindalina, infografika ary taratasy fotsy dia mahazo vahana kokoa. Tsy mifantoka amin'ny famokarana atiny izahay fa mifantoka amin'ny fananganana tranomboky atiny feno sy feno ho an'ny mpanjifanay tsirairay.
Misy maningana ve? Eny Mazava ho azy. Ireo mpamokatra votoatin'ny orinasa amin'ny indostrian'ny fifaninanana be dia be dia mety mbola hahazo tombony tsara ihany Search Engine Optimization. Ampitomboy ny fiantraikan'ny pejy an-tapitrisany ary hisy fiverenana lehibe amin'ny fampiasam-bola. Saingy ireo orinasa ireo dia maningana, fa tsy ny lalàna. Ny ankamaroan'ny orinasa dia aleo mampitombo ny fampiasam-bola amin'ireo fitsipika efatra etsy ambony.
Tags: fanovana rohyteny fanalahidyMozfampiroboroboana karamaatiny premierfamokarana atiny voalohanyfifandraisana amin'ny vahoakaSEOfampiroboroboana ara-tsosialytaratasy fotsyWhitepaper
Fitsipika momba ny varotra B3B 2 izay tokony hampidirin'ny paikadinao ankehitriny
Sep 7, 2016 ao amin'ny 1: PM PM
Famintinana mahaliana, misaotra.